Ndepụta Excel iji gbanwee site na Nchịkọta Geographic na UTM - Geofumadas
Ụdị Excel iji tọghata site na Geographic Coordinates ka UTM
Febụwarị, 2008 ArchiCAD, Cartografia, downloads
Ụdị tempụ a na-eme ka ntọghata nke nhazi ala na ogo, minit na sekọnd na nhazi UTM.
1. Otu esi abanye data
A ghaghị ịhazi data ahụ na mpempe akwụkwọ dị mma, n'ụzọ dị otú a na ha ga-abịa n'ụdị achọrọ. N'ezie, a ga-asọpụrụ mmachi ndị metụtara metụtara ụkpụrụ ndị anabatara ka anyị na-ekwu mgbe anyị na-akọwa kọntaktị UTM.
A na-ahọrọ spheroid na ụdị ọdịda
Kọlụm mbụ bụ naanị itinye nọmba ọnụ ọgụgụ
Ogidi ndị na-acha odo odo ga-abanye na nhazi mpaghara
Ugbochi na longitudes ga-abia na nọmba (na-enweghị ogo, nkeji ma ọ bụ sekọnd ihe nnọchianya), ma kewapụ ya na kọlụm dị iche iche, sekọnd nwere ike inwe decimals.
Ụdị ogo n'ogologo ekwesịghị iru 180
Ụdị na latitudes ekwesịghị iru 90
Oge nkeji na sekọnd ekwesịghị iru 60, n'ihi na ha ga-abụrịrị nke akụkụ nke ọzọ
Ọwụwa-Anyanwụ / West ga-abụrịrị "W" ma ọ bụ "W", nnukwu mgbago
North / South ga-abụrịrị "N" ma ọ bụ "S", nnukwu
Ọ bụrụ na ị jikwaa ịkwadebe ha na ibe ọzọ kachasị mma, na njirimara ndị ahụ ị ga-eme naanị idetuo / mado
Ogidi ndị dị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ntọala UTM, dị ka spheroid họọrọ, nakwa mpaghara ahụ gosipụtara.
3. Otu esi eziga ha na AutoCAD
Ogige ndị ọzọ bụ ntọala UTM ka i wee ziga ha na AutoCAD dịka anyị na-akọwa ya n'isiokwu ọzọ. Iji zipu site na Excel UTM na Google Earth lee isiokwu a.
Nyochaa ya, ma kọọ nsogbu ọ bụla
Ụdị template iji tọghata nhazi obodo na UTM.
Ị nwere ike ịzụta ya Kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ Paypal.
Previous Post«Previous Ịmepụta Grid Ghazi
Next Post Gwa UTM na Geographic na-ejikọta ExcelNext »
51 Na-aza na "Excel Template iji gbanwee site na Nchịkọta Geographic na UTM"
August, 2019 na
Dee ozi email rutere mgbe ịzụrụ ihe a, nke mere na ha zitere gị ndebiri nke na-abụghị nke na-akwado nhazi na ogo, nkeji na sekọnd kamakwa na decimim.
M zụtara ndebiri iji gbanwee mpaghara ala gaa na UTM. Ajuju m bu: kedu ka m ga - esi tinye nd ị na - ahazi ihe gbasara ala?
O doro anya na eserese ahụ anaghị amata ha, n'ihi na ọ na-egosi oghere UTM ọzọ (mpaghara).
Ọ bụrụ na ọ.
Mana ị ghaghị ilezi anya, na data gị nwere:
komma ahụ ka ọ bụrụ puku iche, nke mere na ọ bụ: -56.514,707 -12.734,156
Lelee ma ị nwere ike ịgbanwe nke ahụ na ntọala mpaghara gị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnwale tupu ịzụta ya, ziga ọmụmaatụ nke data nke kachasị n’aka, na ndị editọ akwụkwọ ozi (@) geofumadas. com
Alves kwuru, sị:
Atụmatụ a tụgharịrị Geographic Coordinate (Grau Decimal) na UTM na mita
Ọpụ: X -56.514.707
Iji: X 552758.64049
Miguel Navarrete kwuru, sị:
February, 2018 na
Daalụ nke ukwuu, enweelarị template ahụ, naanị otu obi abụọ, n'agbanyeghị na agụlarị m post banyere etu ndebiri si arụ ọrụ yana ihe na-ezo aka na nhazi UTM, ọ bụrụ na m nọ na mpaghara Yucatan na enwere m ihe na-esonụ N 20 - 26 - 31.5 W 90 - 01 - 42.5, dị ka m na-eme ma ọ bụrụ na ihe ngosi na-ekwu na latitude enweghị ike iru ogo 90, m ga-enwe ekele maka enyemaka gị
N'abalị ụnyaahụ ka ezigara gị, na mail miguel.manamond ...
Anyị zigara ya na nke a miguel.navarrete ...
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, ka anyị mara.
Hello ụbọchị ọma n'abalị ikpeazụ ụgwọ via Paypal Excel template tọghata ala-achịkọta na UTM, ma ọ bụghị download njikọ, m nwere azụmahịa id ma ọ dị mkpa na m ga-esi, m ga-abụ maara nke azịza ekele
Enwetarala m mail nke njikọ njikọ.
Nsogbu ọ bụla i mere ka m mara.
Rafael Gallardo López. kwuru, sị:
Akwụwo m ụgwọ na PayPal ma anaghị m ahụ nhọrọ ọ bụla na nkwụnye ego PayPal.
Kwụọ 13 nke July nke 2.017. 08: 59: 22 GMT + 02: 00.
Nhọrọ ID: 6SC71916TD634893X
Biko gwa m otu esi ebudata faịlụ ahụ.
Dolphin kwuru, sị:
na-aga site degrees, nkeji na sekọnd degrees na decimals, ị ga-kewaa nkeji na sekọnd 60 3600, n'ihe banyere ntụpọ echekwara ndị a ụkpụrụ na Graos chioma.
Ị nwere ike ịmepụta spreadsheet na exel.
Ángel Vilches kwuru, sị:
October, 2014 na
Nke mbụ, na-ekele gị maka ịkekọrịta ihe ọmụma gị.
Nke abuo: ebudatara m geographic na UTM, mana m kwesịrị ịma ihe spheroid m na-eji maka Brazil, ma ọ bụ nkọwa nke nke m ga-eji maka ọnọdụ dị iche iche.
jose kwuru, sị:
ezigbo nkọwa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
Brian kwuru, sị:
March, 2013 na
Ihe oyiyi a sitere na Geograficas na UTM
Lelee email ahụ, mgbe ụfọdụ ọ na-aga spam. Mana ozugbo ịkwụ ụgwọ ahụ, ị ​​ga-enweta nnata na PayPal yana email nwere nsogbu ibudata.
Jose Antonio kwuru, sị:
Emere ugwo, olee otu esi ebudata ya?
jose matzar kwuru, sị:
mee okirikiri 1.00 na okirikiri wee họrọ okirikiri ka ịbanyechara nhazi UTM gị wee tinye igodo ya tinye mkpụrụed z wee leta E wee banye ma jiri aka gị chọta mpaghara nhazi UTM gị ozugbo, mee nnwale ahụ wee gwa m.
Nke ahụ dị mma Ọ gaghị enwe ike.
Iji rụọ ọrụ UTM na mpaghara ebe mpaghara ahụ gbanwere, ị ghaghị ime mgbanwe ụgha, ka mpaghara gị gbasaa.
Ma ọ bụ ọrụ na nhazi nke ala.
Jasiel kwuru, sị:
Ndewo, ezigbo ehihie. Ajụjụ m bụ: Gịnị ka m nwere ike ime ma ọ bụrụ na ịbanye na nchịkọta ọrụ na ntụpọ na ị gaghị egosi mpaghara nke ị na-anya? Enweelarị m nhazi na UTM mana autocad anaghị achịkwa (ma ọ bụ na achọtabeghị m ụzọ ịgbanwe ya). Ihe nlele mgbe itinye nchịkọta UTM na mpaghara 15 enweghị m nsogbu, ma mgbe m banyere mpaghara 16 anaghị etinye ha na akụkụ ahụ chọrọ.
Lelee folda spam ahụ, mgbe niile na azụmahịa na ụgwọ azụmahịa na-akwụghachi download url.
Roberto kwuru, sị:
M ugwo ugwo maka paypal ma o nweghi ihe ebudatara .. i nwere ike iziga ya na mail m?
M ugwo ugwo ya ma weghara ihe obula .. gini ka m me?
Na bọtịnụ acha anụnụ anụnụ nke na-ekwu "Budata"
humberto kwuru, sị:
dị mma nke ukwuu na post gị ebe m nwere ike ibudata usoro na nke exc
ezigbo onyinye dị mma ijikọ ozi na ihe ọmụma niile
Fco kwuru, sị:
Francisco Hernández kwuru, sị:
Jenụwarị, 2012 na
Daalụ maka ịmekọrịta ihe ọmụma ahụ. Ọmụmụ ihe, iji ya eme ihe na njikwa nke ozi bụ ngwá agha kachasị mma maka ịhapụ na ịchịisi.
javi kwuru, sị:
geofumadas maka president
Aitor kwuru, sị:
Amaghị m ihe ndị ọzọ, mana ihe na-agbadata m bụ mpempe akwụkwọ nwere data nke naanị usoro bụ iji gbakwunye ọnụọgụgụ akara na data nke nhazi "agbakọ" mbụ. O nweghi ukwu ma obu isi, n’echiche m. Ọ bụrụ n’enwere ike lelee ya.
kwusi pines kwuru, sị:
magburu onwe onyinye ekele ekele gị friend'm a na-agbanyụ ọkụ na ndị na-now iji GPS cell phones m kwesịrị ya n'ihi na mgbe onye reorta dị ka furu efu na ekwentị m ngụkọta oge na na sekọnd nwere UTM nrụtụ maka search na ot nchọgharị na na a na laptọọpụ nwere ike ịmata nke ọma ebe mpaghara ahụ dị ma si otú ahụ mechie gburugburu ọchụchọ ahụ
Michal kwuru, sị:
Ndewo m, achọtara m ozi na-adọrọ mmasị banyere ndọtị faịlụ na file-extensions.org.
Onye ọzụzụ atụrụ kwuru, sị:
Ee, m ga-edebe ebe m na-ederede. Ekele gị blog m esoro ala a ebe shp faịlụ na Honduras, na ugbu a, m na-aga UTM nrụtụ na-emepụta a oyi akwa na kwantum GIS, gị agụba kemgbe nke bara oké uru enyemaka.
Naanị ihe m chọrọ iji mara na m na-eji Linux na OpenOffice 3.0, na gị malitegharịa akakabarede na-arụ ọrụ na nganga na Calc. No m jisiri iṅomi faịlụ ruo ka CSV format, ma nke ahụ adịghị mkpa mgbe nile, n'ihi na e nwere ndị bụghị ọtụtụ ihe, otú ahụ ka m ezuru mee ya aka, na gburugburu ọnụ ọgụgụ ahụ, n'ihi na onye na-ahụ maka nchekwa na Quantum yiri ka ọ naghị akwado decimals.
N'ọnọdụ ọ bụla, blog gị bụ enyemaka dị oké ọnụ ahịa maka ndị dị ka m, bụ ndị sitere na akwụkwọ ozi, mana ha nwere mmasị ịbanye ụwa nke usoro ihe ọmụma nke ala.
Adịghị m enye gị otu puku ekele, n'ihi na ha emeela ya n'elu ụlọ ...
Iji kwuo ya ị nwere ike iji
Luis kwuru, sị:
Ekele Cordial ma enwere m ike ikele gị maka onyinye dị iche iche ị na-enye ebe a; Karịsịa, ntụgharị "uka" nke ndị na - achịkọta ihe bara uru nke ukwuu. Otu ajụjụ: kedu ka ọ ga - esi wee kwupụta onyinye ntụgharị gị na akwụkwọ gị?
Alejandro Vilchis kwuru, sị:
Ekele Galvarezhn, M na-ahụ saịtị gị na-adọrọ mmasị ma abụ m nnukwu ọrụ bara uru. Daalụ
Alvaro kwuru, sị:
July, 2009 na
otu puku ekele
Ismael kwuru, sị:
Pass gafere ogo na sekọnd:
Gibran kwuru, sị:
Ndewo, nke a magburu onwe ya, onye maara nke ọma ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ogo nkeji nkeji sekọnd na ogo ogo? ekele tupu oge eruo
Nrọ kwuru, sị:
Daalụ, ọ dị mma!
Ezi onyinye !! Enwere ike ịkọrọ ụdị ozi a.
San Renato kwuru, sị:
Ike, 2009 na
Hey ... M na-eme nyocha na GPS mana maka “ncheta teknụzụ” (echefuru eriri eriri) enweghị m ike mezue nyocha m ma mee ya na onye na-anya ụgbọ mmiri ... na amaghị m etu esi gbanwee ngalaba ... ha kpọpụrụ m ezigbo ọsọ ... nnukwu !!!!
ị ga-edetuo usoro zuru ezu ahụ,
na-ekpuchi ahịrị na ogidi ndị a na-adịghị ahụ anya ma wepụta akara ọgbara ọhụrụ
dianicus kwuru, sị:
dị ezigbo mma ma dị irè, daalụ! n'agbanyeghị na enwere m obere nsogbu, gịnị ka m ga - eme mgbe m nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhazi 8000 iji gbanwee ...? -i kachasị na-enye ohere 323… - Agbalịrị m ịdọrọ usoro ahụ mana ọ naghị arụ ọrụ.
Mfe, ngwa ngwa, dị, Amaghị m ihe ọzọ ị nwere ike ịjụ.
David kwuru, sị:
Daalụ maka njikọ nke utm na geographies, na akwụkwọ ahụ dị mma na-abịa ihe m chọrọ site na ogo.
Enyemaka ọzọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye m bụ ma ọ bụrụ na enwere mpempe akwụkwọ ntụgharị nke ukwuu site na tme, na nke ọzọ. ekele m
Hi David nke a O nwere ihe kachasị mma nke na-agbanye, site na utm na ala.
Ihe banyere ime mpempe akwụkwọ nke na-agbanwe decimals na ogo, nkeji na sekọnd ... ma eleghị anya, otu n'ime ụbọchị ndị a, m ga-anọdụ ala iji mee ya
Ezigbo ọrụ !! Ekele m. M na-arụ ọrụ na ụdị ntụgharị a, site na utm to tme, tme to utm na geodesics na mgbanwe ndị a niile, ana m eji usoro TMCalc, ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma maka m, mana oge ụfọdụ enwere mpempe akwụkwọ kachasị mma iji mee mgbanwe ahụ mmemme ahụ, ọ bụrụ na mmadụ si UTM gaa Geodesics nke ọma ọ ga-abụ nnukwu onyinye nye m ...
Ebum n’uche m bụ ka m chọta peeji a. Ọ bụ mpempe akwụkwọ kachasị mma nke gafere m ogo bụ ntụpọ (ogo 45.7625) ruo nkeji nkeji na sekọnd (45 ′ 45 ′ 45.000 ′), ị nwere ike inyere m aka, gbaghara ma ọ bụrụ na nke a abụghị ọgbakọ .. email m bụ ingdvd1@hotmail.com
María Alonzo kwuru, sị:
Naanị ekele maka ozi ahụ, ọ bara ezigbo uru, faịlụ a magburu onwe ya.
EDGAR kwuru, sị:
M na-am ỌMA NA m AUTOCAD na m chọta akwa aka mbipụta nile
Ulises Urcid Beez kwuru, sị:
Ọ dị mma, ekele gị nke ukwuu.
martin kwuru, sị:
Kachasị mma… Ọ naghị enye m ihe ọzọ .. Daalụ .. FILI A…
Daalụ… °°° !!!!!